Toddobada meelood ee ugu quruxda badan Talyaaniga | Wararka Safarka
Goorma waxaan ka fikirnaa Talyaaniga waxaan badanaa ku xirnaa Rome isla markiiba, waana runtii magaalo aad u qurux badan. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo in la arko ah. Xaqiiqdii kaliya 10 meelood ayaa yar, maxaa yeelay Talyaanigu wuxuu ka buuxo geesaha cajiibka ah, meelo taariikh leh iyo magaalooyin soo jiidasho leh, laakiin waa inaad wax ku bilowdaa, sidaa darteed waxaan kuu sameynaynaa liiskan muhiimka ah.
Kuwani waa 7 goobood oo ku yaal Talyaaniga inaynu eegno wax kasta ka hor. Waxaan leenahay meelo leh taallooyin, magaalooyin ku yaal biyaha, magaalooyin ku yaal xeebta iyo kuwo kale oo badan. Ha seegin xulashadan weyn ee meelaha aad tagayso haddii aad ka fekereyso inaad hagaajiso luuqaddaada Talyaaniga, maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin wax xiiso leh oo naga dhigaya inaan degno oo ku noolaano meeshan.
1 Taariikhda Rome
2 Jacaylka Venice
3 Farshaxanka Florence
4 Rabitaanka Pisa
5 Riyo Cinque Terre
6 Fasaxyada Capri
7 Magaalo lagu aasay Pompeii
Waxa laga sheegayo Rome oo aynaan hore u aqoon, loona yaqaanno Magaalada weligeed ah ' maxaa yeelay waxaad moodaa inaanu wakhtigu ku soo dhaafin qarniyo badan. Qaar badan oo ka mid ah taalooyinkii Boqortooyadii Roomaanka ayaa wali taagan, sida caanka caanka ah ee 'Colosseum', booqashadiisii ​​ugu muhiimsanayd. Laakiin marka lagu daro Colosseum waxaan haynaa caanka caanka ah ee loo yaqaan 'Trevi Fountain' kaas oo aan ku sameyn karno rabitaanno, waxaan booqan karnaa Pantheon ee Agrippa oo leh qubbad weyn ama aan booqan karno Golaha Romanka oo dib ugu laaban doona waqtiga.
In Venice, mid ka mid ah magaalooyinka ugu jacaylka badan adduunka ayaa na sugaya, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa asalka ah, maxaa yeelay waxay ku taal biyaha. Gondola waxay ku dhex socotaa jidadkeeda iyo meelaha ugu caansan waa wax aan la seegi karin. The Buundada Rialto Waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn ee gudbaya kanaallada, waana shaki la'aan sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, sidaa darteed marinka ay dhex marayso sidoo kale waa waajib. Dhinaca kale, ha ilaawin inaad booqato Fagaaraha San Marcos, adoo keenaya ceelal haddii ay daadad galaan. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa Caanka caanka ah ee Ducal iyo Basilica qurux badan oo San Marcos ah. Jidka waxaan sidoo kale ku istaagi karnaa qaar ka mid ah dhismooyinka astaanta u ah magaalada ee hadda ku yaal matxafyada.
Florence waa magaalo ku habboon dadka jecel farshaxanka, waana taas dhexdeeda waxaan ka arki karnaa kumayaal taallooyin iyo shuqullo ay farshaxanno sida Michelangelo ama Giotto. Haddii aan ka bilowno Piazza del Duomo waxaan horeyba u joogi doonaa mid ka mid ah meelaha leh taallooyin badan oo la arko, maadaama ay tahay Cathedral ama Duomo, Campanille iyo Battistero. Meel kale oo ay booqdayaasha oo dhami rabaan inay arkaan waa Ponte Vecchio, oo leh guryo caan ah oo sudhan, farshaxanno iyo dukaamo ku dhex yaal. Mid ka mid ah buundooyinka ugu caansan adduunka, iyo buundada ugu da'da weyn Yurub oo dhan.
Pisa waxay caan ku noqotay u janjeedha Tower, sidoo kale waxay leedahay taalooyin leh qaab u gaar ah, qaabka Pisan, oo ah Romanesque ay dib u qeexeen Pisans-ku. Booqashada Pisa waligeed ma qaadaneyso wax ka badan hal maalin, waxa ugu xiisaha badanina waa kuwa ku xigta munaaradda Pisa, oo ay tahay inaad fuusho si aad ugu raaxeysato aragtideeda. Waxaa ku xiga Duomo iyo Baptistery.
Riyo Cinque Terre
Cinque Terre waa a aag leh shan magaalo: Vernazza, Corniglia, Monterosso al Mare, Riomaggiore iyo Manarola. Maaddaama ay sii kordhayaan booqdayaasha, mas'uuliyiinta ayaa ka fikiraya xakamaynta dalxiiska iyo yaraynta tirada booqashooyinka sanadkiiba. In Cinque Terre waxaan ka helnaa tuulooyin xeebeed qurux badan oo umuuqda in laga joojiyay buuraha, oo leh guryo midabo badan leh oo siiya muuqaal aad u riyooda. Laakiin sidoo kale waa goob qiimo dabiici ah oo weyn leh jidad socod dheer oo xiiso leh.
Capri horeyba wuxuu ugu jiray waqtiyadii Roomaanka jasiirad sidaa darteed xagaaga fasalka sare, maaddaama ay jiraan hadhaagii guryihii Roomaanka. Qarnigii XNUMX-aad waxay mar labaad noqotay dalxiis xagaaga raaxo leh. Booqashada Capri waxay arkaysaa mid ka mid ah meelahaas oo ay ka buuxdo soojiidasho iyo xarrago Talyaani ah. Meel aan ku raaxeysan karno xeebaheeda iyo xeebteeda, iyo aragtiyada kor u kacaysa ee ku saabsan jasiiradda funicular.
Magaalo lagu aasay Pompeii
Qof kastaa wuu baran doonaa sheekada Pompeii, magaalada qadiimiga ah taas waa la aasay markii uu qarxay Vesuvius, markay ahayd AD 79. Markii lagu aasay si lama filaan ah, magaaladu sideedii bay ahaatay, xitaa qaabkii meydadka qaar ka mid ah dadkii deggenaa, oo la yaabay qarxa, ayaa la ilaaliyaa. Magaaladaani waxay ku jirtaa xaalad ilaalin oo wanaagsan markaa waxay na siineysaa fikrad ah sidii ay ku noolaayeen waqtigaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Toddobada meelood ee ugu quruxda badan Talyaaniga
Gastronomy-ka Shiinaha, siddeed nooc oo aad u dhadhan fiican leh
Canberra, caasimada Australia